OoVimba bobuGcisa-Funda ukuRhweba
tag: Uhlalutyo lobuchwephesha
ICardano Records Massive Network Growth ngo-2021 njenge-ADA Wallets Tsiba nge-1,200% YTD
The ICardano (ADA) I-blockchain irekhode ukukhula okuphawulekayo kulo nyaka, okubonakalayo kwi-boom erekhodiweyo kwinani elipheleleyo le-wallets ephethe i-ADA.
Ngokwedatha entsha evela kwi-Cardano Foundation, inani le-wallet ye-ADA likhule ngaphezu kwe-1,200% ngonyaka, ukusuka kwi-190K ye-wallet ngeKrisimesi ka-2020 ukuya kwi-2.5 yezigidi ze-wallet namhlanje.
Ukukhula kwe-meteoric kuza kulandela uphuculo oluninzi lwenethiwekhi kulo nyaka, kunye ne-ADA ibe yeyona cryptocurrency yesithandathu ngobukhulu ngokuxatyiswa kwemarike. Uhlaziyo lusebenze njengezomelezi zokuzithemba kubatyali-mali, nto leyo eye yanyusa ukwamkelwa kwenethiwekhi. Ngeli xesha, i-ADA iqokelele ngaphezulu kwama-870% kulo nyaka uphelileyo.
Kuyathakazelisa ukuba ukukhula okukhulu kuza emva kokuba iSiseko sivakalise ukwakha uluntu lwaseCardano ekuqaleni konyaka. Ukunyuka kwezipaji kukwabonise ukuba uninzi lwabanini be-ADA ngabatyali-mali abathengisayo abaphethe imali encinci yemali njengoko i-blockchain iqhubela phambili kulawulo olugqibeleleyo.
Ekugqibeleni, ukuqaliswa kotshintshiselwano olunikezelweyo kwi-Cardano blockchain nayo ibangele ukwanda kwee-wallets ze-ADA. Ukukhankanywa okufanelekileyo kukuba inethiwekhi yatsala abasebenzisi abaninzi be-Ethereum befuna iindlela ezizezinye ze-blockchain kunye neentlawulo zenethiwekhi ezingabizi.
Kulo nyaka, i-Cardano yajoyina uluhlu lwezinye zeendlela eziphezulu kwi-Ethereum emva kokuqaliswa kokuphuculwa kwe-Alonzo, eyavumela i-Smart Contracts.
Amanqanaba eCardano angundoqo aza kuBukelwa - ngoDisemba 24
I-ADA, kwaye uninzi lwemalike ye-crypto, irekhode ukuchacha kabukhali kule veki, njengoko i-cryptocurrency yesithandathu ngobukhulu yaphule umqobo we-1.445 yeedola okokuqala ukusukela ekuqaleni kukaDisemba kwaye yanda kufutshane ne-1.500 yeedola.
I-ADAUSD - Itshathi yeeyure ezi-4 kwiBinance. Umthombo: TradingView
Oko kwathiwa, i-ADA ngoku ibambelele kumgca we-1.445 yeedola njengoko iinkunzi zenkomo ziphelelwa ngumphunga ngaphambi kokubhiyozela iKrisimesi. I-cryptocurrency ifumana inkxaso eyongezelelweyo kwi-4-iyure ye-200 SMA kumgca we-$ 1.445. I-ADA kufuneka ibambe lo mgca kwezi ntsuku zizayo ukutsiba isantya se-bullish kwakhona.
Ukongeza, ikhefu elingaphezulu komqobo we-1.500 yeedola kufuneka lifake i-samente i-rebound ngaphezulu kwenqanaba eliphakathi letshaneli yam ehlayo, ekufuneka ibuyisele i-cryptocurrency kwi-2 yeedola.
Okwangoku, amanqanaba ethu oxhathiso ayi- $ 1.500, i- $ 1.550, kunye ne- $ 1.600, kwaye amanqanaba enkxaso ayi- $ 1.400, $ 1.350, kunye ne- $ 1.300.
Imali eyintloko yentengiso yeCardano: $ 48.3 billion